WARARKA MAANTA – Shacabka News
Qiso yaab leh: Nin xoogiisa ku dhisaya masaajid Jaamac ah.
Abaara 2010kii ayaa Macalin Cabdikariin Cabdiraxmaan Xasan oo dadka qaar u yaqaanaan Muxiyadiin waxa uu magaalada Galkacyo ka iibiyay dhul dhan 20m x 40m oo la mid ah 800 M2, abaara 10 sano kahor.
Duco aan ku ducaysto ayaa igu dhalisay in waxa aan doonayay wax ka weyn ilaahay ila doonayo, marka
Laba sano kadib markii uu dhulka iibiyay ayuu helay riyo lagu amrayo in uu masaajidka mixraabkiisa jeexo, kadibna waxaa ku dhalatay in uu iibsado bir uu ku qodo dhoobada dhagaxana ku jabiyo, wuxuu sidoo kale dajiyay naqshada masaajidka iyo qaybaha uu ka koobnaan doono HAI, wuxuuna jeexay naqshadii qaybahaasi yeelan lahaayeen.
Qaybta 1aad: masjidka raga 20 x 10
Qaybta 2aad: masjidka dumarka 10 x 10
Qaybta 3aad: Madarasada quraanka: 3 qol
Qaybta 4aad: hoolka cilmiga lag barto
Qaybta 5aad: Guriga imaamka iyo martida masaajidka
Qaybta 6aad: Waysada
Qaybta 7aad: suuliyada oo isugu jira
Suuliyaasha raga 4 suuli
Suuliyadda haweenka 2 suuli
Habeenkii ayuu bilaabay inuu dhagaxa iyo dhoobada jabiyo maalinkiina inuu jeexo aasaaskii masaajidka.
“ilaahay ayaa qalbiga ii waasiciyay, waxaana fahmay in shaqadani tahay mid ka wanaagsan mid ilaahay igu galaday oo ka wanaagsan waxyaabihii aan anigu dalbayay, waxaan dalbay in aan helo dad khayrkan ila qaybsada baytka ilaahayna ila dhisa waxaana sameeyay khasnad bir ah oo aan dhex dhigay suuqa, alxamdulilaah wixii ka soo baxay waxay ii buuxiyeen badeeladii, iyo qalabyo yaryar oo aan u baahnaa mase noqon mid keenta wax ka badan boqol doolar” ayuu yiri Cabdiraxmaan oo ka waramayay xaaladihii uu soo maray
Macalin Cabdiraxmaan waxa uu qaatay qorshe buuxa oo isku tashi ah, wakhtigiisana waxa uu ku koobay khidmadda dhismaha masaajidka, dhagaxa ayuu jabiyaa, dhoobada ayuu qodaa, marka uu aasku madoobaadana waxa uu bilaabaa inuu soo daabulo dhoobadii iyo dhagixii uu maanta diyaariyay, markii hore wuxuu ku bilaabay dusha inuu ku soo guro, markii danbase wuxuu fahmay in Gaari gacan kiradiisa bisha laga sugayo uu ku soo daldasho agabkiisa, kiradaas oo uu ku bixin jiray labaatan doolar oo bishiiba uu mar ka heli jiray dhakhtar ay saaxiibo yihiin oo haatan jaamacad ka dhiga magaalada Hargeysa.
Aroortii ayuu Macalin Cabdiraxmaan Bilaabaa inuu raadiyo nolol maalmeedkiisa, hadii uu wax dhaafsan calooshiisa Alle ku irsaaqana wuxuu horay u kaxaystaa fuundi dhismaha yaqaan, kaasoo marna inta uu joornaatigu u gooyo dhismaha kala la dhisa marka kalana u noqda macalin uu kaga daydo farsamada dhismaha,
Intaas waxaa u dheer Macalin Cabdiraxmaan waa xaafid quraanka illaahay qalbigiisa lagu daabacay quraanka, sidoo kalana wuxuu aad wax uga yaqaan Asmaa’ul xusnaha iyo xiriirka kala dhexeeya quraanka.
Wuxuu bogcadda masaajidka ku dhex akhriyaa Quraanka inta badan xilliyada firaaqada ah.
Shan sano kadib, aasaaskii masaajidka dhamaan waa dhisan yahay, wajiga horana wuxuu dhisan yahay in hal mitir ka badan, qaybuhu dhamaan waa kala googo’an yihiin, dhoobo badan ayaa dhex taal, qaar ka mid ah dhoobaduna waxay u qaabaysan yihiin in la qooyo.
Lawrar dhagax ah oo uu gacantiisa ku jabiyay ayaa u yaal meel ka baxsan magaaladda, wuxuuna rajaynayaa in Illaahay u soo diri doono kuwo uu khayr la doonay oo la qaybsada dhamaystirka ceelkan dheemanka ka qaalisan ee illaahay ku Qahray isagu inuu bilaabo.
Waa arrin la yaab leh in qof kaligiis ah oo aan wax hanti ah haysan cid uu isku halaynayo oo Alle ka soo hartayna aysan jirin inuu isu xilqaamo dhisme xarun intaas le’eg oo illaahay dartiis loo unkay, dhididkiisa iyo xoogiisana inuu ku hirgaliyo ayaa ka go’an, taasoo aad dareemi karto marka aad aragto xarunta masaajidka loo asteeyay iyo xooga galay.
Haddaba, ma laga yaabaa in qormadani ay noqoto mid albaabada u furta dad daacad ah oo Alle khayr weyn la doonay oo Gargaar iyo garab istaag wanaagsan u noqda Macalin Cabdiraxmaan kana caawiya dhismaha iyo dhamaystirka masaajidka Al-fataax.
Shabakadda warbaahinta ee ———– waxay go’aansatay in ay noqoto talafishinkii ugu horeeyay ee si mutadawacnimo ah u baahiya juhdiga Macalin Cabdiraxmaan waxaanan Alle ka filaynaa in soo gudbintani noqoto mid gudata hadafkii lagga lahaa isla markaana farxad galisa adiga iyo daawadayaasha ama dhagaystayaasha kale ee Illaahay khayrkan inay ka faa’iidaystaan la doonay.
Iyo in faa’iidada danbe noqoto mid abaal marintteeda ay haleelaan bahda warbaahinta ka qayb qaadatay fidinta barnaamijkan iyo dhamaystirka dhismaha Masaajidka Al-fataax mudane iyo marwaba.
Waxaa cad in qorshaha macalinku yahay mid ka mid kuwa ugu hufan sadaqo jaariyooyinka wan wanaagsan ee sabankan ina soo maray laga filayo in ka qayb galkiisa lagu helo wax ka badan waxkasta oo maskaxdeena ku soo dhici kara.
Walaal Kala Xariir Tell:00252906109536 ama Hormud: 00252617947215
Author Mohamed YarePosted on 04/02/2018 Categories WARARKA MAANTALeave a comment on Qiso yaab leh: Nin xoogiisa ku dhisaya masaajid Jaamac ah.